Gaariga Denizli cable | RayHaber | raillynews
HomeBaabuurta farsamada badda
Iyada oo gaadiid la siinayo Başıbaşı Plateau oo ku taal Denizli, gaadhiga fiilada ayaa dib u habeeyay shaqadiisa saacadihii Ciidul Adxada si loo hubiyo in muwaadiniintu waqti badan galaan. Bağbaşı oo leh Magaalada Magaalo waxaa furay Denizli Metropolitan Dowlada Hoose [More ...]
Dawladda Hoose ee Magaalada Denizli oo leh kuleylka cimilada, Denizli Cable Car iyo Bagbasi Plateau ayaa furitaanka iyo xiritaanka saacadaha dalabka xagaaga la bilaabay. Diyaarinta Waqtiga Cusub waa sida soo socota; Furitaanka usbuuca ee 10: 00 Xiritaanka 21: 00 Toddobaadka [More ...]
Mushtaarsi xooggan oo lagu qiyaasay Baakistaan
4, oo ay xilsaartay Dawladda Hoose ee Magaalada Denizli qiyaastii 1500 sano ka hor, waxay la yaab ku noqotay kuwii ku arkay 7,125 joogga sare ee Denizli Cable Car iyo XNUMX kiilogaraam ee Bagramsba in Plateau. Xoojinta nolosha bulshada ee dadka Denizli [More ...]
2 Daryeelka Maalinlaha ah ee Dayac-tirka Khariidadda Khariidadda Khadka Badda ee Denizli
Bağbaşı Plateau Cable Car iyo Xarumaha Bulshada, oo ah mid ka mid xarumaha ugu waaweyn ee soo jiidashada ee Denizli, waxaa la galiyay dayactir xilli xilliyeed ah ka hor xilliga xagaaga. Kadib markii lagu dhammeeyay Denizli, oo ah mid ka mid xarumaha ugu waaweyn ee soo jiidashada magaalada [More ...]
Waxaa lagu madadaalin doonaa xafladaha xilliga qaboobaha fiidkii lagu qabanayo Teleferik ee degmada Pamukkale ee Denizli. Iyada oo xiise weyn loo qabo xafladda jiilaalka ee Denizli, oo leh aragti 1.500-mitir ah oo ku saabsan shirarka oo ay ku jiraan makhaayadaha iyo munaasabadaha kale ee soo booqda. [More ...]
Digniin cusub oo loogu talagalay Denizli Teleferik
Digniin cusub ayaa loo soo saaray kuwa aadaya gawaarida USB cable Denizli. Jidkii la xayiray dabeysha adag awgeed. Dabayl culus oo ka dhacday Denizli, oo wax ku ool ah, ayaa joojisay adeegyada gawaarida fiilada. Shalay Denizli Meteorology [More ...]
Waxay ku riyaaqeen baabuurtii telefishinka iyo barta Bagbasi
Gudoomiye ku xigeenka AK Party Prof.Dr. Dr. Numan Kurtulmuş iyo asxaabtiisa, aragtida qaaliga ah ee Denizli Cable Car iyo Bagbasi Plateau ayaa soo jiitay. Gudoomiyaha Xisbiga AK Party iyo Kuxigeenka Kuxigeenka Istanbul. [More ...]